ऊर्जामन्त्री हुँदा कुलमानसंग मिलेर १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङलाइ मुक्ति दिने शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा – Sapana Sanjal
ऊर्जामन्त्री हुँदा कुलमानसंग मिलेर १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङलाइ मुक्ति दिने शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा
July 14, 2021 160
Sapana Sanjal : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र)का स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलापछि गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा शर्मा राजनीतिक जीवनमा चौथो पटक मन्त्रीका रुपमा नियुक्त हुनुभएको हो ।
यसअघि विसं २०६५ मा शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री, विसं २०७३ मा ऊर्जामन्त्री र विसं २०७४ मा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभएका शर्माले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न लाग्नुभएको छ । ऊर्जामन्त्रीका रुपमा उहाँको कार्यकाल स्मरणयोग्य छ । चर्को विद्युत्भार कटौतीका मारमा परेका नेपाली जनतालाई त्यसबाट मुक्त गराउन उहाँले प्रभावकारी कदम चाल्नुभएको थियो । तत्कालीन नेकपा९माओवादी०ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा डेपुटी कमाण्डर शर्माको कार्ययोजनामा नै मुलुकले १६ घण्टासम्मको विद्युत्भार कटौतीबाट मुक्ति पाएको थियो । उज्यालो नेपाल निर्माणको श्रेय पाउनुभएका शर्मा प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ ।
मुसिकोट नगरपालिका–५ रुकुम पश्चिममा विसं २०२० वैशाख २६ गते बुबा इस्केन्द्र र आमा नर्मदा शर्माको सुपुत्रका रुपमा जन्मनुभएका शर्माको विशेष रुचिको क्षेत्र साहित्य र कृषि हो । उहाँ विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ । विसं २०६३ मा अन्तरिम व्यवस्थापिका सदस्य, संविधानसभा २०६४ र २०७४ मा सदस्यका रुपमा निर्वाचित शर्माले राजनीतिमा आउनुअघि कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा पाँच वर्ष सेवा गर्नुभएको थियो । शर्माले जनसेवाश्री र संविधानसभा पदक प्राप्त गर्नुभएको छ ।
शर्माका बाबु स्कन्द शर्मा रुकुममा कम्युनिष्ट पार्टीलाई संस्थागत गर्नेमध्येका एक हुनुहुन्थ्यो। राजनीतिक परिवारमा हुर्केका शर्मा २०३४ सालदेखि नै राजनीतिमा लाग्नु भएको हो। जनयुद्धको समयमा कहिले सेना कहिले सङ्गठन गर्दै धेरै समय सेती महाकालीतिर बिताएको शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्लाटुन, बटालियन कमिसार हुदै डिभिजन कमाण्डर ७ वटा डिभिजन भएपछि प्रभाकर डेपुटी कमा४८डर हुनुभएको थियो।
उहाँकी श्रीमती लक्ष्मी पौडेल पनि माओवादीकी राज्यसमितिकी सदस्य हुनुहन्छ। नाच्ने गाउन खप्पिस शर्माले २०४६ सालमा नाचे गाएकै आधारमा शान्ति सुरक्षा ऐन अन्तर्गत जेलमा थुनिनु भएको थियो। शिक्षा शास्त्रमा स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका शर्मा धेरै वर्षसम्म सेती महाकालीको इन्चार्ज भएर सुदूर पश्चिममा काम गर्नु भएको थियो।
Prevएमालेमा माधव नेपाल फेरि शक्तिशाली
Nextशेरबहादुर धेरैका लागि कागजी बाघ !
खाना पकाउने ग्यास सिलिण्डर प ड् किदा ३ बालबालिका सहित ७ जनाको मृत्यु , २ घर भत्किएर १४ जना पुरीए
काठमाडौको टोखामा युवतीहरु नै यस्तो काममा संलग्न ! प्रहरी पुग्ने बित्तिकै भागे
के पुनः लकडाउन हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले दिए यस्तो सङ्केत
राष्ट्रपतिसँग माधव नेपालले भने : म यहिँ छु मेरो हस्ताक्षर ओलीले कसरी बुझाउनु भयो ?